नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : स्याबास डिसी नेपाली समाज यो जरुरी थियो अमेरिकामा ! पदका भोकेहरु, कोठेहरु, नेपालको गन्धा राजनीति अमेरिका भित्र्याएर गुटबन्दी गर्नेहरुलाई यो पाठ बनोस !
स्याबास डिसी नेपाली समाज यो जरुरी थियो अमेरिकामा ! पदका भोकेहरु, कोठेहरु, नेपालको गन्धा राजनीति अमेरिका भित्र्याएर गुटबन्दी गर्नेहरुलाई यो पाठ बनोस !
नेपाली भन्दा अङ्रेजी बोल्दा गौरब गर्ने नेपाली साना नाना नानीका बाउ आमाहरु, अङ्रेजी होइन नेपाली बोल्दा गर्ब गर ! अमेरिकामा अङ्रेजी बोल्नु ठुलो कुरा होइन नेपाली बोल्नु ठुलो कुरा हो । छोरा छोरीलाई नेपाली भाषा सिकाउ होइन भने तिमी र तिम्रा आफन्त सबै बिर्सिनेछन तिम्रा छोराछोरीले पछी !
फोटोहरु आफै समाचार बोलिरहेका छन हामी बोलेनौँ !